ABEESADA FARTA LOO TAAGI FANAXAY U BOODAA,By Mohamed Mousa | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » ABEESADA FARTA LOO TAAGI FANAXAY U BOODAA,By Mohamed Mousa
ABEESADA FARTA LOO TAAGI FANAXAY U BOODAA,By Mohamed Mousa
Posted by admin on January 24th, 2013 12:45 PM | FADHIGA SUBULAHA
Marka Hore waxan salaama inta u damqata jiritaanka Gadabuursi, kuwa isku howla inay ka hadlaan riyada qaawan ee rag beesha Isse ka mid ahi ku hadaaqyaan iyo kuwa horjooga ragga beesha Isaaq ka midi ah ee ka shaqaynayaa baaba’a Gadabuursi iyo kuwa danaynaaya nabada Somaliland.
Waxan hadda Saylac ka dhacaayi waa wax la filaayey oo isa soo taraayay muddo dheer. Laga soo bilaabo markii Gadabuursigu labadii Korsi ee Saylac u tuuray Isse ilaa markii Rayaale u dhabeeyey damac Ciise ee u magaabay Gobolka Salal ee Gobolkii Awdal laba u gala gooyey, ilaa maantadan an joogno ee Ciise lagu kari laayey in ay aqbalaan natiijada doorshadii ka dhacday Gobolka, waxa socday olole Ciise oo laga wado Djibouti. Ololahaas oo ah mi dad Ciisaha ka midi wadaan, dad Isaaqa ka mid ihina ku caawinaayaan iga oo dantooda dhaqaale iyo baayacmushtarba ilaashanaaya. Isku soo wada duub oo raiyadani waa mid ka timiday maskaxo aan caafimaad qabin. Waayo dhulku maaha cad la qaysanayo, mana guuro. Dadku meel uu ka guuraa meelkalana uu degaa oo waakii Ciisaba carooga isu afoofay ee afarta bayna garje isaga imiday ee sidii shini la horqaaday boqoradoodii aguugay ee hab ku yidhi Djibouti.
Qisaba layaab lehe, waxyigani ka soo degay Djibouti ee Somaliland hab ku yidhi ayaa u sabab ah? Arintani waxay cadaysay in Somaliland laga xugumo Djibouti oo sida dadka qaarkii u malaynaayo ka fog. Saansaanto waxay ina tusaysaa in Isaaq rabo in ay Djibouti ku biiraan waayo macquulmaaha waxan Isaaq samaynaayo. Halgankan Isaaq ku jiru ee gar iyo gardaraba ku taageeraayo Ciise ayaa muujinaysa fikirkaas. Hadii ay Isaaq ka dhabtahay gooni isu taaga Somaliland, sidan way dhaami lahaayeen oo diimoqraadiyadda iyo distoorka ay samaysteenbay xeergooda ka mari lahaayeen wayna is qaban lahaayeen. Isaaqa inta caafimaad qabta ee nabadda iyo dariswanaaga jeceli ma waxay garan waayeen inay kuwoogan beesha Ciise ku taageeraaya damaca qaawan ee Somaliland burburinaaya ah ay qabtaan.
Mar maaha oo laba maaha inta Beesha Ciise far loo tagay ee ay fanax u booday; Gobanimada Djibouti ee ay isa siiyeen kow dhe, Xildhibaanadii Saylac ay bila doorashada lagu siiyey laba dhe, Sideedan xildhibaan ee ayna kolaba Somalia doorasha kaga heleen saddex dhe, Xildhibaanadan Somaliland ee bila doorashada ku yimid afar dhe, … Hadda waxay rabaan in far kale loo taago oo gobolkan Salal ee sidda kale ku yimid ay ku darsadaan Djibouti iyaga oo isticmaalaaya reera Isaaqa ka mid ah. Waxa jira rag fara ku tiris ah oo baacyacmushtarka Djibouti ah iyo kuwadowlada iyo axsaabta Somaliland ka mi ihi oo dantooda ka shaqaynaayi Ciise garab ku siinayaan gardaradan ay ka wadaan saylac.
Waxa la yidhi Timir Lafbaa ku jirta. Waxa dabda looga warwareejinaayo arintan haqqa iyo nadaam dimoraadi ah iyo doorasho xalaal ah ku timid maxay tahay? Waa damac iyo taageero xunguri. Ciise damacbaa haya, inta Isaaq ee taageeraysana hunguribaa haya. Nin hungori kaa qaadayna waa nin seefi kaa qaaday.
Isku soo wada duuboo xumaatan iyo fidnadan Ciise iyo ragaa hungurigu qaaday wadaani waxay dhalxalsan doontaa jiritaanka iyo nabadda Somaliland.
ashley judd cosmetic surgery
book of ra online direkt spielen
mlm leads for weight loss
inscriÃ§Ãµes bbb 2014 oficial
best cardiologist los angeles ca
e cigs free sample
irish wedding planners in Ireland
Illuminazione risparmio energetico
Invention City Review
find hcg diet in Tucson, Ariz
get a quote on home insuranc
homeowners insurance quots
« ADUUNYADA NIN NOOLOW MAXAA ARAGTII KUU LAABAN,By Mohammed Mouse
SILICA SIYAASADA S/LAND+SUL?UX SI U GALINTA SAYLAC=SAQ?IIRKA S/LAND.By Mohamed Mahamoud Shirdon »